Baleka zonke izibophelelo zemihla ngemihla - I-Airbnb
Baleka zonke izibophelelo zemihla ngemihla
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguAlexander & Anna-Karin
UAlexander & Anna-Karin yi-Superhost
Wamkelekile kwindlu yethu entle yasehlotyeni eStranderäng! Ineyona ndawo ifanelekileyo phakathi kweSmögen, iLysekil, iHunnebostrand kunye neBovallstrand. Yiva izikhova zibhomboloza ngokuhlwa kwaye uvuse ama-hummingbirds. Kufuphi nolwandle, iintaba kunye neNordens Ark (ipaki yezilwanyana zasendle). Indawo efanelekileyo yokujonga iBohuslän.
Yonwabela ukuhlala uphumle kwikhabhathi yethu epholileyo i-“Enerliden” ebekwe kwindawo entle yaseBohuslän. Ukuqhubela phambili e-Åby fjorden, engqongwe ziintaba kunye nehlathi.1 iyure kunye nemizuzu eli-10 ngemoto ukusuka eGothenburg, imizuzu engama-20 ukusuka eSmögen, imizuzu engama-20 eHunnebostrand, imizuzu eyi-15 eBovallstrand kunye nemizuzu emi-5 ukusuka eNordens Ark.
•Iiqebengwana zengingqi, ikofu okanye iti zinikwa xa ungenile
•Igumbi eliphezulu elinebhedi enye ephindwe kabini kunye neyodwa + itv enetshaneli 1,2 kunye ne-4 (umabonakude waseSweden) unokuqhagamshela ikhompyutha yakho ngokulula kumabonwakude ngentambo ye-hdmi.
•Indlu yeendwendwe eyahluliweyo enebhedi ezimbini zabantu abangabodwa (akukho mbane kwindlu yeendwendwe, sisebenzisa imibane ye-sun cellar)
•Ikhitshi eligcweleyo kuquka isitovu sokupheka, ifriji, ifriji, imicrowave kunye nebhoyila yamanzi. Ikhitshi ixhotyiswe kakuhle ngezixhobo zokupheka kunye neemveliso ezisisiseko zokupheka (imifuno, ityuwa / ipepile, ioli yomnquma njl.njl.)
•Ikhitshi langaphandle kwiveranda elinesitovu sokupheka
•Iziko (ubonelelo lunikiwe)
•Ishawari yangaphandle emangalisayo, amanzi abalekayo akatshisi ngaphandle kokuba uwabilise esitovini okanye usebenzisa kwibhoyila yamanzi.
•Indlu yangasese ibekwe ecaleni kwendlu yeendwendwe. Sinendlu yangasese eyomileyo yebhayoloji entsha kraca, ikhangeleka yahluke kancinane kwindlu yangasese eqhelekileyo kodwa asiyonto yakuzikhathaza ngayo. Akukho vumba, akukho nkcitho yamanzi ilungele indalo esingqongileyo!
•Idekhi yabucala eneBBQ (amalahle anikiwe)
•Sinamanzi abalekayo aphuma kwimpompo yethu yequla lamanzi efumaneka egadini.
•Isitishi sokutya egadini
Le yindawo enembali eninzi. Ikhabhini yethu yenye yezona zindala kule ndawo. Ngaphambili yayilikhaya lomthungi wezihlangu, umfazi nabantwana bakhe abane!
Kukho ukukrolwa kwamatye okwahlukileyo kwihlabathi ukusuka kwiBronze Age, imizuzu emi-5 yokuqhuba ukusuka kwikhabhathi yethu. Sinepaki entle yezilwanyana zasendle ebizwa ngokuba yi-Nordens ark (bona nordensark.se) kufutshane nje.
Iindlela zokuhamba zingaphandle nje komnyango, ukuba ungumkhweli wamkelekile eparadesi! Ababukeli beentaka baya kubona iintlobo ezininzi zendalo e-Åby fjorden. Ulwandle lukumgama oziimitha ezingama-500 kuphela, kodwa ukuze ufumane iindawo ezifanelekileyo zokuqubha kufuneka ukhwele ibhayisekile okanye uqhube kancinci phambili.
Siza kuzama ukulayisha incwadi yesikhokelo kunye neengcebiso zethu ezilungileyo zokuhlala kwakho ngokukhawuleza kwisiza se-airbnb.
Umbuki zindwendwe ngu- Alexander & Anna-Karin
We both share the love for the nature, outdoor activities, travelling and meeting people from all over the world.
Gothenburg is our very beloved hometown, our cabin in Stranderäng is our magical getaway and Åre is a our own place in the mountains - so magical!
We are both very friendly and easygoing and we want to make sure that you have a great experience!
Gothenburg is our very beloved hometown, our cabin i…
Unokuhlala unxibelelana nathi nge-airbnb app okanye usitsalele umnxeba ngexesha lotyelelo lwakho. Siyavuya ukukunika iingcebiso ngokuhlala kwakho!